May 14, 2016 – नेपालि भिडियो ब्लग, पहिलो र एक मात्र
चिनबाट काठमाण्डौंको लागि रेल छुट्यो तर, आइपुग्ला कहिले? ५ बर्षमा? १० बर्षमा?
चाइनाबाट बैशाख २९ गते काठमाण्डौंसम्मका लागि भनेर एक रेल नेपाल तर्फ हिंडेको छ । तर बिडम्बना, रेल काठमान्डौं त परको कुरा हो बोर्डरसम्म आइपुग्न पनि ५-६०० किलोमिटर लामो रेल गुडने बाटो (लिक) अझै बनाउनै बाँकि छ । बोर्डर बाट ३५ किमि टाढा तिब्बत तर्फको बजार केरुंग सम्म रेलको लिक बनाउने कार्य शुरु भइ सकेको समाचार छ । तर, यो लिक पुर्ण रुपमा तयार हुन अझै २-४ बर्ष लाग्छ । त्यस पछि केरुंगबाट बोर्डर हुँदै काठमाण्डौं सम्म रेल ल्याउने रेल्वेलाइन बनाउने जिम्मा नेपाल सरकारको हो ।
अब प्रश्न उठ्छ के काठमाण्डौं सम्म रेल आइ पुग्ला त? आइ पुगे पनि, कति बर्षमा आउला ?
बाटो कस्तो छ?
चिन सरकारले क्विंग्हाइ – तिब्बत रेलवे नेटवर्कको बिस्तार गरेर केरुंग बजारसम्म ल्याउने कार्य सन २०२० सम्ममा सक्ने लक्ष लिएको छ । सो कुराको जानकारि तिब्बत स्वशाशित क्षेत्रका चेयरम्यान लोसांग जेम्कानले सन २०१५मा तिब्बत पुगेका नेपालका तक्कालिन राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवलाइ बताएका थिए ।
सन २०१४ को डिसेम्बरमा नेपाल भ्रमणमा आएका चिनिया बिदेशमन्त्रि वांग यि ले नेपाल सरकारलाइ तिब्बतको सिंगास्ते बाटा काठमाण्डौंसम्म रेल्वेलाइन बिस्तारको सम्भाब्यता अध्ययन गर्न अनुरोध गरेका थिए । चिनले आफ्नो तर्फ रेल्वे लाइन बिस्तार कार्यलाइ निरंतरता दिए पनि नेपाल पक्षले भने सो बारेमा गम्भिरतापुर्वक कार्य अघि बढाएको मलाइ जानकारि छैन ।